fanontaniana FSX Weather
1 taona 2 volana lasa izay #854 by Dariussssss
Noho ny antony maromaro, ny endri-pahavelomana mivantana eo amin'ny FSX dia diso. Tsy hoe diso fotsiny, fa na aiza na aiza eo akaikin'ny zava-misy, na mety ho an'ny seranana sasany. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina any Eorôpa dia miatrika fahantrana noho ny oram-basy mahery vaika.
Ho an'ny exmple, EHAM Amsterdam..ahoana, ny toetrandro dia:
Wind 16 kt avy any avaratra
Sava: 4000 m
Clouds scattered on 400 ft
Alavoly amin'ny 700 ft
Ao amin'ny FSX, tsy mitovy ny fomba. Clear skies, different winds and more warm ... what is hell? Misy lalana manodidina azy ve?
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: luc57
1 taona 4 andro lasa izay - 1 taona 4 andro lasa izay #941 by DRCW
Ny moty Weather momba ny baikon'ny baikon'ny FSX dia tsy manohana an'i JESPEN izay manome anao ny toetr'andro mivantana. Azoko an-tsaina fa mbola manao izany ho an'ny fanontana Steam izay nomen'ny Dovetail fifanarahana amin'izy ireo. Ny serivisy dia tsy afaka amin'ny Dovetail. Tahaka ny amin'izao fotoana izao, ny FSW dia mbola tsy manana môtô avy amin'ny toetr'andro mafana na orinasa mpamokatra hafa afaka mividy azy. Ny hany làlan-tena hahazoana ny tontolo andro iainana ho an'ny famoahana FSX Boxed dia ny hividy iray amin'ny Active Sky 2016
Fanovana farany: 1 taona 4 andro lasa izay by DRCW.
11 volana 2 herinandro lasa izay #1013 by goffers
Nahita fandaharam-pahaizana maimaim-poana aho - kely sy mametraka ny toetrandro miaina amin'ny FSX - FSXWX.
Tsy mila mametraka ianao. Raiso ny programa FSXWX rehefa ao amin'ny FSX ianao.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: DRCW
11 volana 2 herinandro lasa izay #1014 by Dariussssss
Tsy azo tanterahana ilay tranonkala ..... amin'ny dikanteny, rohy maty.
9 volana 3 herinandro lasa izay #1063 by goffers
Hi Dariussssss. Tsy azonao antoka izay tianao holazainao. Ny rohy dia toa miasa ho ahy amin'izao fotoana izao.
Angamba ity iray ity, (aiza ny finday azo hita). www.plane-pics.de/fsxwx/instructions-fsx.htm
9 volana 3 herinandro lasa izay #1064 by Welsheagle
Io rohy io dia miasa ho ahy kanefa tiako ny manoro hevitra www.fsrealwx.net/
Mampiasa azy aho ary manome anao ny tena toetr'andro izany .. ny fotoana rehetra.
Azonao atao ny mampiasa ny dikan-teny maimaim-poana na fanavaozana ny pro.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: goffers